Misy ireo izay milaza fa tokony hitandrina mba tsy hanakiana ny fampihorohoroana Islamika satria efa zavatra amin 'ny anaran ny Kristianisma. Izany dia mamitaka kabary tsara lahatra, manasongadina ny fifantohana hiala avy amin'i Jesosy Kristy!
Hoy i Jesosy fa tsy tokony hamono olona amin'ny anarany. Kosa, dia hoy Izy tamin'i Petera fa tokony hifikitra sabatra indray ny tranony. Izao no hafatry ny Jesosy.
Fa amin'ny Muhammad, dia zavatra tena hafa. Izy dia maty, ary hamono tena, ary nandidy fa ny olon-kafa hanao toy izany koa. Tsy tokony mampitaha ny fivavahana silamo sy ny Kristianisma, na ny mpianany amin'ny tsirairay.
Kosa, dia mampitaha an'i Jesosy sy Muhammad, na ny Tompon 'ny Baiboly sy Allah ny CORAN. Avy eo dia hitantsika fa mifanohitra tanteraka izy ireo, ary tsy misy ifandraisany amin'ny tsirairay.
Jereo / Vakio koa:
7 fahasamihafana eo amin'ny Jesosy sy Muhammad
Vecka 17, torsdag 25 april 2019 kl. 12:23